China 60w Vaginal laser Equipment mpanamboatra sy mpamatsy | Adelic
Ny laser lattice dia karazana fitsaboana laser ao an-toerana vaovao CO2, izay mampiasa ny teknolojia microlens mandroso indrindra eto an-tany. Ity teknolojia ity dia afaka manao ny rafitra laser hamokatra taratra micro micro pulse maro be. Aorian'ny fiasan'ireo taratra ultra pulsa ireo amin'ny tavy amin'ny hoditra dia afaka mamorona savaivony 0,12 nm ka hatramin'ny 1,2 nm amin'ny hoditra izy ireo. Ny laser dia mizara ho micro micro arrays, ary ny fitsaboana tsirairay dia tsy manadio na manamafy ireo hevitra ireo fotsiny. Mijanona ho ara-dalàna ny ankamaroan'ny faritra. Ka haingana ny fanarenana ary avo ny fiarovana.
1. Ny teknolojia misy latte-mature dia tsy vitan'ny mandrindra ny hakitroky ny lattice, fa koa mifehy ny halalin'ny fidirana, ny sakan'ny pulse ary ny angovo ao amin'ny lattice, ary ny fametrahana azy dia marina kokoa ary ny fitsaboana dia mitovy.
2. Ny sakany amin'ny pulsa azo ovaina, ny endrika azo ovaina, ny habeny. Araka ny toetry ny hoditra sy ny tanjon'ny fitsaboana, ny fari-pitsaboana manokana dia azo foronina sy hotsaboina.
3. Ny haitao tsy fitoviana tsy mandeha dia mety hahatonga ny hafanan'ny tambatsela mifanila aminy hiparitaka ara-potoana, ary tsy hamorona fanangonana hafanana, hampihena ny fahasimban'ny hafanana ary hampihena ny mety hisian'ny fahasarotana samihafa.
4. Ny laser misy hery lehibe sy hery lehibe dia angovo bebe kokoa, hafainganam-pandeha haingana kokoa, fotoana fanasitranana fohy kokoa, tsy dia misy fahasimbana manodidina ny hoditra ary ny effet photochemical tsara kokoa.
5. Ny fomba fitiliana isan-karazany (filaharana, fizarana afovoany, filaharana tsy mifanaraka) dia mety amin'ny fiasan'ny klinika isan-karazany.
Haben'ny habaka: toradroa 36pc (6x6), 144pc (12x12), 324pc (18x18), 441pc (21x21) / cm2
Bika notarafina Sary 7 karazana: telozoro, toradroa, mahitsizoro, diamondra, boribory, oval ary DIY
Teo aloha: Masinina 4 amin'ny 1 4 Hands Cryo Fat Loss
Manaraka: 10600nm CO2 Fitaovana Laser Laser Terminator
Laser fanamafisana ny fivaviana Co2